ढोरबराहि रङ्गशाला Info. About. What's This?
ⓘ ढोरबराहि रङ्गशाला
ढोरबराहि रङ्गशाला तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकि नगरवालिका वडा नम्बर ८, ढोरफिर्दी गणपति बजारमा बन्न लागेको एक फुटबल रङ्गशाला हो । नगरपालिकाले नगरकै शानको रूपमा यस रङ्गशालाको निर्माण घोषणा गरेको थियो भने रङ्गशालाको डिपिआर समेत तयार पारिसकेको छ ।
1. क्षेत्रफल विवरण
ढोरफिर्दीस्थित गाउँफर्कोदय माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्न लागिएको छ । भने सोही विद्यालयको १०० रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणलाई लक्षित गरेर बाटो सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । रङ्गशालाभित्र फुटबल मैदान, कभर्डहल, पार्किङ, चमेना गृह, टिकट काउण्टर, प्रशासनिक भवनलगायत निर्माण गरिनेछ । साथै रङ्गशाला निर्माणका लागि करीब २० करोड बजेट आवश्यक पर्ने नगरपालिकाले अनुमान गरेको ।
Wikipedia: ढोरबराहि रङ्गशाला